Ciidmada isbahaysiga iyo shababoo isku fara saarey Duleedka degmada Baardheere * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidmada isbahaysiga iyo shababoo isku fara saarey Duleedka degmada Baardheere
By MAREEG	 On Jul 16, 2015
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada huwanta iyo Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka dhaceen deegaano u dhow degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Sida ay sheegayaan wararka Ciidamada huwanta oo la sheegay inay dhinaca Fax-Fax-dhuun ka soo dhaqaaqeen ayaa waxay Al-Shabaab kula dagaalameen meel u dhow deegaanka Taraaka oo qiyaastii 50-KM u jirta Baardheere.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ahaa mid culus oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana ciidamadii huwanta ahaa u suura gashay inay deegaankaas ka soo gudbaan.
Ciidamada huwanta ah ayaa xalay ku hoyday deegaanka Garas-dulan oo qiyaastii illaa 30-KM u jira Baardheere.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay in Ciidamada is garabsanaya ay dhowr jiho kaga wajahan yihiin Baardheere, isla markaana saacadaha soo socda ay horumar ka sameyn doonaan is ballaarintooda.
Dhinaca kale dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa iyana la sheegay in difaacyo dhigeen duleedyada Baardheere, waxaana ciidamada huwanta ay la kulmayaan iska caabin iyo weeraro miinooyin ah oo dhulka lagu aasay
Ra’iisul Wasaaraha oo Garowe kula kulmay Saraakiishii ka gadooday Puntland